रफ्तारका नायक आचार्यसँग जम्काभेट-Nagarikaawaj.com
रफ्तारका नायक आचार्यसँग जम्काभेट
आइतवार, जेष्ठ २५, २०७१
दुई मुटु एक धड्कन, हात लाग्यो शुन्य, करामत, दम द पावर, रफ्तार लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका शिव आचार्य यतिवेला ‘सुहागन विना सिन्दुर के’ नामको भोजपुरी चलचित्रमा पनि अभिनय गर्दैछन् । बुटवलमा जन्मीएका आचार्य नेपाली चलचित्रमा फरक अभिनय गर्नेहो भने दर्शकले मन पराउँछन भन्छन् । शायदै चलचित्र वाहेक अधिकासं चलचित्रले व्यवसायीक सफलता हात पार्न नसकेकीरहेको बेला समसामयिक कथावस्तुमा जिवन्त अभिनय गर्नेहो भने चलचित्र राम्रो चल्ने दावि उनको छ । रफ्तारको सुटिङमा अहिलेपनि व्यस्त नायक आचार्यसँग पत्रकार रामजी ज्ञवालीको जम्का भेट ।
रफ्तार कस्तो खालको चलचित्र हो ?
– एक्सन, सस्पेन्स, कमेडि विधालाई वढि फोकस गरिएको छ । नेपाली र भोजपुरी भाषामा यो चलचित्रको छायाँकन भैरहेको छ । अव केही समयमै छायाँकन सकिने गरि काम भैरहेको छ ।
रफ्तारमा तपाईको भुमीका कस्तो छ ?
– यो दादागिरी गर्ने गुण्डाहरुको विषयमा रहेर निर्माण गरिएको चलचित्र हो । मेरो भुमीका सस्पेन्सनै छ । पुरा हेर्न चलचित्रनै हेर्नुपर्छ ।
निर्माण नसकिदै चलचित्रको चर्चा निकै छ नी ?
– चर्चा हुनुको पछाडी प्रमुख कारण यसका निर्देशक हुनुहुन्छ । दर्जनको हाराहारीमा भोजपुरी चलचित्र निर्माण गरिसक्नुभएका समिर कुमार जोशी भोजपुरी सिनेमामा स्टारकै रुपमा चिनीनुहुन्छ । सोही कारणपनि यस चलचित्रको चर्चा वढेको हो । झण्डै १ करोड खर्चिन लागिएको यो सिनेमा नेपालमा सर्वाधिक लगानी गरिएका चचित्रहरु मध्ये अग्रपक्तींमा पनि आउँछ । त्यस्तैगरि भोजपुरी चलचित्रकी स्टार नायीका तनु श्रीको भुमीका पनि यस चलचित्रमा भएकाले निर्माण नसकिदै चलचित्रको चर्चा व्यापक भएको हो ।
नेपालमा व्यवसायीक रुपमा कमै चलचित्रल भएका छन नी ?
– चलचित्रमा फरक अभिनय गर्नेहो भने दर्शकले मन पराउने कुरामा द्धिवीधा छैन । शायदै चलचित्र वाहेक अधिकासं चलचित्रले व्यवसायीक सफलता हात पार्न नसकेकीरहेको थाहा हुदाहुदैपनि हामीले यो रिक्स उठाउनुका पछि पनि केही छ । कुनै फरक पना रफ्तारमा दिन चाहेका छौं । साच्चीकै भन्नेहो भने समसामयिक कथावस्तुमा जिवन्त अभिनय गर्नेहो भने चलचित्र राम्रो चल्छ ।
– अन्त्यमा नागरिक आवाज डट कम प्रति आभारी छु । नेपाली आम चलचित्र प्रेमीहरुमा यो विश्वास दिन चाहान्छ तपाईहरुको ईक्षा अनुसार चलचित्रहरुमा काम गरेर देखाएको छु र देखाउनेछु । सकेसम्म राम्रा चलचित्रमानै अभिनय गर्ने सोचका साथ निकै मिहेनत गरेर आईरहेको छु पक्कैपनि मायाँ गर्नुहुनेछ आशा छ । धन्यवाद् ।